Masangano Akazvimirira Oga Okurudzira Vanhu Kuti Vapikise VaMugabe paNyaya yeBumbiro
Gumiguru 25, 2012
WASHINGTON — Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite chirwirangwe kuitira kuti vamise mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vanoti vanoda kupedzisa ivo nevamwe vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa, chirongwa chekunyora bumbiro idzva remitemo yenyika.
Komiti yeparamende iri kukokera kunyorwa kwebumbiro idzva, yeCOPAC, yakapedza chirongwa cheAll Stakeholders Conference yechipiri nemusi weChipiri uye yange yave kutarisirwa kukwenenzvera gwaro rebumbiro pamwe negwaro rezvakaitika kana kuti national report yoenda nayo kuparamende.
Asi VaMugabe vanonzi vari kuti COPAC haichina nechekuita nebumbiro iri. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti vana veZimbabwe vanofanira kuti vabatane pasi pechirongwa chavari kuti Save the Constitution Campaign kuitira kuti vamise VaMugabe pahurongwa hwavari kuda kuita uhu.
Chirongwa cheCrisis in Zimbabwe ichi chiri kutsigirwa nemasangano anoshanda ari pasi peZZZICOMP anoti Zimbabwe Elections Support Network, ZESN, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, pamwe neIndependent Constitution Monitoring Project.
Masangano aya anoti pakapera musangano weAll Stakeholders Conference hapana kujekeswa kuti pachazoitwa sei.
Anoti COPAC inofanira kujekesa kuti zvii zviri kuitika kuti vezvematongerwo enyika vasazoita zvisizvo nebumbiro vachityora chibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo nhengo dzeZanu-PF muCOPAC neManagement Committee hadzisiwo kutenderana naVaMugabe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPhillan Zamchiya, kuchamhembe kweAfrica vanoti VaMugabe vanofanira kumiswa zvavari kuronga kuita.